Ngaba uMphathi weZiko lakho kufuneka aQinisekiswe?
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Indawo yeendwendwe » Ngaba uMphathi weZiko lakho kufuneka aQinisekiswe?
Umphathi weziko unoxanduva lokongamela imisebenzi yemihla ngemihla yesakhiwo okanye yeofisi. Baqinisekisa ukuba yonke into ihamba kakuhle kwaye abasebenzi bakhuselekile kwaye banemveliso.
Ukuba ujonge ukuqesha umphathi weziko elitsha, kuninzi ekufuneka kuqwalaselwe. Ukusuka kwiimfuno zomvuzo, isiqinisekiso solawulo lwezibonelelo kuxanduva lomsebenzi, nantsi imibuzo emihlanu omele uzibuze yona phambi kokuba uqeshe umntu.
Abaphathi bamaziko bahlala bejonga izakhiwo ezininzi okanye iiofisi ngaxeshanye, besenza imisebenzi yabo ibe nzima ngakumbi. Nantsi imibuzo emihlanu omele uzibuze yona ukuba ufuna ukufumana umphathi weziko ogqibeleleyo.
1. Ziziphi iziQinisekiso zabo?
Abaphathi bamaziko aqinisekisiweyo baphumelele iimviwo ezilawulwa yiFacilities Management Association of America. I-FMAA inikezela ngamanqanaba amabini esatifikethi: uMphathi weZiko loBuchule oQinisekisiweyo kunye noMphathi weZiko oQinisekisiweyo.
Ukutyunjwa kwe-CPFM kufuna ukuba abaviwa baphumelele ikhosi ye-CMFA's Fundamentals of Facility Management course kunye nothotho lweemviwo kwizihloko ezinjengolawulo lokhuseleko, uhlahlo lwabiwo-mali, izibonelelo zabasebenzi, ulawulo lolwakhiwo, kunye nezinye iinkalo ezinxulumene nolawulo lweziko. Abaviwa kufuneka kwakhona bagqibe iiyure ezingama-300 zophuhliso lobungcali ukuze bafumane esi satifikethi.
Ukufumana ukutyunjwa kwe-CPMM, abaviwa kufuneka baphumelele iimvavanyo ezifanayo nezo zifunekayo kwi-CPMM. Sekunjalo, kufuneka babonise ubuchule kwiinkalo ezongezelelweyo ezifana nolawulo lweprojekthi, ulawulo lomngcipheko, kunye nokuzinza. Abaviwa abagqiba ezi khosi kunye neemviwo banokulindela ukwenza malunga ne-$ 50k ngonyaka.
2. Mangakanani Amava abanawo?
Umgqatswa ofanelekileyo uya kuba neminyaka emininzi yamava okulawula isakhiwo esikhulu okanye isakhiwo seofisi. Oku kuthetha ukuba baya kuyazi indlela yokubeka phambili imisebenzi kunye nokulawula abantu. Kubalulekile ukuqaphela ukuba abanye abaphathi bamaziko baqala ngamava angaphantsi kweminyaka emithathu. Nangona kunjalo, akuqhelekanga ukuba bafumane amava abalulekileyo ngexesha le-internship okanye izikhundla zexeshana.
3. Ngaba uMgqatswa usebenza kakuhle nabanye?
Kuqhelekile ukuba abaphathi bamaziko basebenze ngokusondeleyo neenjineli, abayili bezakhiwo, iikontraka,
kunye nezinye iingcali. Ukuba ukhangele umntu onokuthi asebenzisane ngokufanelekileyo nabanye, khangela umviwa osebenze namaqela ahlukeneyo ngaphakathi kwenkampani. Umphathi weziko olungileyo uya kuqonda ukuba iqela ngalinye lifuna ntoni kwaye kutheni kwenziwe izigqibo ezithile.
4. Ngaba Banokuzisingatha Iimeko Ezicinezelayo?
Abanye abaphathi bamaziko basenokucelwa ukuba bajongane nokumka kombane, iintlekele zemvelo, okanye iimeko zongxamiseko zabasebenzi. Ezi meko zifuna ukucinga ngokukhawuleza kunye nenyathelo eliqinisekileyo. Khangela umviwa obonisa izakhono zobunkokeli obuqinileyo xa ujongene neemeko ezixinzelelekileyo.
5. Ngaba Ikhona Enye Into Endifanele Ndiyazi Ngabo?
Khangela umgqatswa onerekhodi eqinisekisiweyo yempumelelo. Cela iireferensi kubaqeshi bangaphambili kwaye ujonge uphononongo lwe-intanethi. Unokufuna kwakhona udliwano-ndlebe nabaviwa abambalwa ngaphambi kokuba ukhethe enye.
Iindidi zeSatifikethi soMphathi weZiko
Kukho iintlobo ezimbini zezatifikethi zolawulo loncedo ezikhoyo. UMbutho woLawulo lweZibonelelo ubonelela ngesinye. I-International Facility Managers Association ibonelela ngenye. Yomibini le mibutho ibonelela ngeenkqubo ezifanayo, ngoko ke nayiphi na inkqubo oyikhethayo, unokuqiniseka ukuba ukhethe indlela elungileyo.
Nantsi iyantlukwano phakathi kwezi nkqubo zimbini:
• I-CPFM – Inkqubo eqinisekisiweyo ye-FMAA yenzelwe abantu abasele benesidanga se-bachelor kushishino okanye kwenye indawo. I-FMAA ibonelela ngoMdibaniso weNzululwazi kwisidanga soLawulo lweZiko kunye nesiqinisekiso sayo. Ukuze bafanelekele ukufumana isidanga se-ASFM, abafundi kufuneka bathathe ubuncinane iiyure ezili-12 zetyala kwikholeji evunyiweyo okanye eyunivesithi. Abafundi ke bagqibezele intsalela yemfundo yabo ngenkqubo yoqeqesho ye-FMAA.
• I-CPMM – Inkqubo eqinisekisiweyo ye-IFMA igxile kakhulu kwizakhono zokusebenza. Abantu abagqiba ikhosi ye-IFMA eQinisekisiweyo kwiMisebenzi yoKwakha bafumana isatifikethi kwiinkalo ezine ezingundoqo: ucwangciso lwesiza, imisebenzi yokwakha; ukugcinwa; kunye nokusebenza kakuhle kwamandla. Ukongeza, bafunda malunga netekhnoloji yamva nje esetyenziswa kushishino.
Zombini ezi nkqubo zibandakanya imiyalelo yaseklasini, ukuziqhelanisa nokuziqhelanisa, kunye neemviwo ezibhaliweyo. Emva kokugqiba inkqubo, abaviwa banokufaka isicelo sokuhlala uviwo lwesatifikethi.
Uxanduva loMphathi weZiko
Umphathi weziko wongamela yonke imiba yesakhiwo okanye yeofisi. Umsebenzi wabo uquka ukuqinisekisa ukuba yonke into ihamba kakuhle, kuquka nokugcina imigangatho ephezulu yokhuseleko nokhuseleko. Nalu uxanduva olumbalwa lomphathi weziko:
1. Ugcina iMigangatho yoKhuseleko
Abaphathi bamaziko baqinisekisa ukuba yonke inkalo yesakhiwo ihlangabezana nezikhokelo ezingqongqo zezempilo nokhuseleko. Ngokomzekelo, bayaqinisekisa ukuba akukho michiza iyingozi ikhoyo kufuphi nemithombo yamanzi okanye iindawo okulungiselelwa kuzo ukutya. Bakwajonga umgangatho womoya kwaye bagcine inkqubo yokufudumeza icocekile.
2. Ugcina abaSebenzi bekhuselekile
Abaphathi bamaziko mabakhusele abasebenzi ekwenzakaleni. Oku kuthetha ukuqinisekisa ukuba iindawo zokusebenza ziyahlangabezana neemfuno ze-ergonomic, ukubonelela ngokukhanya okufanelekileyo, kunye nokufakela izicima-mlilo. Kufuneka banikezele ngeendawo zokuphuma ezingxamisekileyo kunye nezixhobo zoncedo lokuqala.
3. Uqinisekisa ukuSebenza ngokuSebenza kwaMandla
Abaphathi bamaziko bajongana nokusetyenziswa kwamandla kwisakhiwo. Kufuneka baqhube uhlolo rhoqo kwaye baqinisekise ukuba iinkqubo zeHVAC zisebenza ngokufanelekileyo. Kufuneka bafakele izixhobo zokonga umbane ezifana neebhalbhu zokukhanya kunye ne-thermostats.
4. Ubeka iliso kwiMali yoLondolozo
Abaphathi bamaziko kufuneka bazihlole rhoqo izixhobo zokusebenza ukuqinisekisa ukuba zisebenza ngokuchanekileyo. Kufuneka kwakhona bagcine iirekhodi ezibhaliweyo naziphi na iingxaki ezifunyenwe ngexesha lokulungiswa.
5. Wongamela uKhuseleko loKwakha
Abaphathi bamaziko kufuneka baqinisekise ukuba izakhiwo zikhuselekile. Kufuneka babeke iliso kwiindawo zokungena kwaye baqinisekise ukuba iingcango zitshixiwe xa zingasetyenziswa. Kufuneka kwakhona baqeqeshe abasebenzi ukuba baqaphele izenzo ezikrokrisayo kwaye baxele naziphi na izinto ezibaxhalabisayo ngokukhawuleza.
Umsebenzi wolawulo lweziko unamakhondo amaninzi ahlukeneyo akhoyo. Ngelixa abanye abaphathi bezibonelelo banokusebenza kwindawo enye efana uluhlu lwezixhobo zogcino lwemizi-mveliso, abanye banokukhetha ukugxila kwiinkalo ezininzi. Nokuba yeyiphi na indlela oyikhethayo, umphathi weziko uya kudlala indima ebalulekileyo ekugcineni abantu bekhuselekile kwaye besempilweni.
Oku ngakumbi: inzululwazi | ulawulo | amandla
Ubushushu beSola Bunokubangela izaqhwithi zothuli kuMars inzululwazi|
Unyango olutsha lwe-Autism kunye neSithuthwane inzululwazi|
I-Queen yase-American Voyages ibhengeza umongameli omtsha obambeleyo ulawulo|
Ukusuka kuBC ukuya eAlaska: Inqanawa Entsha iSeti iSikhephe inzululwazi|
amandla ulawulo inzululwazi
Iingcebiso eziluncedo malunga nendlela yokubhala ileta yenkuthazo
Ngawaphi awona mashiti ebhedi atofotofo?
Inqwelomoya entsha yeCaribbean iodolo zeArajet 20 737 MAX iinqwelomoya
Unyango lofuzo lokuqala lwehlabathi lwe-knee osteoarthritis
IDatha ePositive Clinical evela kwiSifundo soNyango lweSeli ye...
Ichiza eliDibeneyo lokuQala eliFixiweyo liZiswe kuHlobo lwesi-2...
I-Symbicort yokuqala entsha evunywe ngabenzi bawo yi-US FDA
IMarike ye-De-Agglomerating Equipment 2022 Abadlali abaPhambili...
Iinqwelomoya zexabiso eliphantsi ziya kuphuma kubhubhane onamandla...
Ulingo lugqityiwe ukuNyanga iRadiation Dermatitis kwi...
I-Nevis ibothusa njani abatyeleli bayo?
ISkal International yamkele uMongameli Onyuliweyo we-IATA ukuba...
Izitofu ezizenzekelayo zeMarike yeMfuno yangoku kunye neyexesha elizayo...
Unyango lwe-infertility lunokubangela i-asthma ephezulu kunye ...
Umhlaza weMiphunga yeSeli engeNcinci: Idatha entsha ye-Preclinical
Ukufuduka kwe-770 kunye nokumisa kucinyiwe eFrankfurt...